Gobolka Jarar Iyo Taageerida Go'aankii Baarlamaanka DDSI - Cakaara News
Gobolka Jarar Iyo Taageerida Go'aankii Baarlamaanka DDSI
Dhagaxbuur( cakaaranews ) Arbaco 2 March 2016 Waxaa saaka dhamaanba Degmooyinka Gobolka Jarar kadhacay banaan-baxyo waawayn oo lagu taageerayo go'aankii geesinimada lahaa ee uu Golaha Baarlamaanka DDSI kalfadhigii 2aad Golihisa 5,aad ku ansixiyay 25ka Degmo, 2da Maamulmagaalo iyo 2da Gobal ee cusub. Taasoo guul wayn u ah dhamaanba Shacabwaynaha Deegaanka Dhanka Horumarka, Nabadgelyada iyo Maamulka-suuban.
Hadaba sida uu Gudoomiyaha Gobolka Jarar mudane Cabdi Cali Mataan ugu waramay shabakada cakaaranews ayaa waxaa dhamaanba Degmooyinka Gobolka kasocda shirar iyo banaanbaxyo lagu taageerayo go'aankii Golaha Wakiilada Shacabka DDSI oo runtii shacabwaynaha dalka iyo kadeegaanka guud ahaan ku dhaliyay farxad aad u balaadhan iyadoo gaar ahaan uu shacabwaynaha degmooyinku aad u soo dhaweeyeen go'aankan XDSHSI iyo ka baarlamaanka ee keenay korodhka horumarineed ee intaa le eg.
Damaashaadka, Dabaaldegyada iyo Banaanbaxyada uu shacabka gobolku samaynayo ayaa ah mid ay ku taageerayaan islamarkaana ay ku faraxsanyihiin ansxinta 25 ka Degmo, 2 mm, iyo 2da Gobal ee cusub, iyagoo wata boodhadh ay kuqoran yihiin odhaahyo muujinaya taageeradooda oo ay ula soobaxeen wadooyinka iyo suuqyada degmooyinka gobolka Jarar.
Sikastaba ha ahaatee dabaaldegyo iyo damaashaadyo noocan ah oo ay samaynayaan shacabka deegaanku ayaa kasocda dhamaanba Gobolada, Degmooyinka iyo Mamul-magaalooyinka deegaanka.